Magaalada Boosaaso oo laga xusay maalinta cudurka duumada ee adduunka- | Puntland Ministry of Health
Shirk u saabsan isku xirka iyo horumarinta caafimaadka Soomaaliya oo Garoowe lagu qabtay
Wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay in bisha Febraayo la bilaabayo dhismaha isbitaalka ugu weyn Puntland.
Magaalada Boosaaso oo laga xusay maalinta cudurka duumada ee adduunka-
Munaasabad lagu xusayey maalinta duumada adduunka (World Malaria day) ayaa lagu qabtay xarunta huteel Gacayte ee magaalada Boosaaso, iyadoo munaasabaddaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Puntland
Waxaa xafladda ka soo qeyb galay wasiirka caafimaadka Puntland, maamulka gobolka Bari, kan degmada Boosaaso, fanaaniin, madax ka socotay hay’addaha WHO iyo Unicef iyo bulshada qaybaheeda kale duwan.
Dr Abdikariin Xuseen Xasan oo ah madaxa la dagaalanka malaariyada iyo cudurrada faafa ee Puntland ayaa ka sheekeeyey waxyaabaha sababay in gobolka Bari oo aan awal duumada lahayn uu haatan noqdo meel ay ka jirto khatartu.
Dr Tedla oo ka socd hay’adda UNICEF global Fun oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in sanad walba cudurka duumada ay u dhintaan malaayiin qof oo ku nool dunida, waana muhiim in loo istaago in la ciribtiro waana macquul in la ciribtiro cudurkaasi.
Duqa Degmada Boosaaso Yaasin Mire Maxamuud ayaa sheegay in ay meel uga wada soo jeesanayaan sidii loo cidhib tiri lahaa cudurka duumada waxaanu bulshada reer Boosaaso ugu baaqay in ay ka feejignaadaan waxyaabaha dhaliya cudurka malaariyada ama duumada
Ugu dambayntii waxaa halkaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr Cabdinaasir Cismaan Ciise Cuuke isagoo sheegay in cudurkan la cidhib tiri karo Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso.
Dinaca kale wasiirka ayaa daahfuray olole balaaaran oo lagula dagaalamayo cudurka duumada.
Hal ku dhigga daahfurka ayaa ahaa cidhib tirka duumadu way wanaagsan tahay.
Fanaaniin ayaa iyaguna goobta ku soo bandhigay murtiyo kala duwan oo ka turjumaysa khatarta cudurka duumada/malaariyada.